Holland oo sheegtay in ay ciidamo lugta ah u soo dirayso barriga Soomaaliya. – Radio Daljir
Holland oo sheegtay in ay ciidamo lugta ah u soo dirayso barriga Soomaaliya.
Dowladda Holland ayaa sheegtay in ay ciidamo lugta ah u soo dirayso dalka Soomaaliya, si ay ula dagaallamaan budhcad badeedka Soomaalida ah.
Wasiirka gaashaandhigga ee Holland Hans Hillen ayaa sheegey in ay dowladdiisu ciidamo dhulka Soomaaliya ku bartilmaameedsada budhcad badeedda u diyaarisay, kuwaas oo uu sheegey in ay ka hawlgali doonaan degaannada xeebaha ah ee ay budhcad badeedku ka qaadaan duullaamada.
Holland ayaa tallaabadan ku taageereysa dhawaan qorshe ay wadajir u soo jeediyeen dalalka Jarmalka iyo Ingiriiska, kuwaas oo ku baaqay in xeebaha Soomaaliya ee ay budhcad badeeddu ka hawlgasho loo diro ciidamo dhulka kala dagaallam, oo cidhib tira.
Ciidamada Holland ayaa sida la sheegey ay barriga Soomaaliya soo wada wajahayaan iyaga iyo cutubyo kale oo ka socda dalalka Jarmalka iyo Ingiriiska.
Tallaabadan ciidan ayaa qayb ka ah dagaal ballaadhan oo ay beesha caalamku kula jirto budhcad badeedda Soomaalida ah. Maraykanka ayaana dhawaan qaaday tallaabo ugaadhsi ah oo ka dhan ah maalgeliyeyaasha budhcadda Soomaalida oo barrigga laga soo qabanayo.
Isku day Nato iyo dalal kale oo dunida ka tirsani ay ku doonayeen in ay badda Soomaaliya kala dagaallamaan budhcadda ayaan wax guul ah laga gaadhin, weeraradii budhcadduna sidii ayaa ay u sii socdaan.